पेटको बोसो निकालेर नितम्बमा - Baikalpikkhabar
पेटको बोसो निकालेर नितम्बमा
भदौ ३१, एजेन्सी / एकजना महिला, जो ३ सन्तानकी आमा हुन् उनी यहीँ सर्जरीका लागि इंगल्याण्डबाट टर्की पुगिन् र उक्त ज्यानमारा सर्जरीका क्रममा उनको मृत्यु भयो ।
टर्कीको इजमिर सहरस्थित एक क्लिनिकमा नितम्ब बढाउने शल्यक्रियाका क्रममा उनलाई तीनपटक हृदयाघात भयो । अन्ततः उनको मृत्यु भयो ।
नितम्बको आकार बढाउने यो फेसनमा गरिने शल्यक्रियाका क्रममा पेटको बोसोलाई निकालेर नितम्बमा प्रत्यारोपण गरिन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार यस सर्जरीका क्रममा मृत्युको दर हर ३ हजारमा एक रहेको छ । तर पनि पछिल्लो समयमा नितम्ब बढाउने शल्यक्रिया गराउने मानिसहरुको संख्या बेलायतमा बढिरहेको छ ।
आखिर महिलाहरुलाई ठूलो नितम्ब किन रुचिरहेको छ ? वास्तवमा महिलाहरु सानो पेट र ठूलो नितम्बसहितको कर्भी फिगरतर्फ आकर्षित भैरहेका छन् ।
सायद आधुनिकताको कारण जिउडाल तथा फेसनमा भएको परिवर्तनका कारण पुरुषको नजर महिलाको नितम्बमा पुगेको हो की ? भन्ने अनुमान धेरैको हुनसक्छ ।
तर, वैज्ञानिकहरुका अनुसार केवल आधुनिक युगका पुरुषहरुले मात्र महिलाको चौडा र पुष्ट नितम्ब मन पराउने गरेका होइनन् । ठूलो नितम्ब प्रतिको पुरुषहरुको आशक्ति परापूर्व कालदेखिको जैविक चरित्र रहेको वैज्ञानिकहरुले ठहर गरेका छन् ।
आइतबार, १८ कार्तिक, २०७५, दिउँसोको ०१:२२ बजे
काठमाडौं, चैत ३ / फागुपूर्णे तथा होलीमा रंग खेल्ने संस्कृति विस्तार भएसँगै नेपालको वैदेशिक व्यापारमा समेत असर पर्न थालेको छ । होलीमा खेलिने रंग, बेलुन र पीचकारी आयात गर्दा पछिल्ला वर्ष नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । फागु मनाउने
प्रेमभावना व्यक्त गर्न नसकेका युवक–युवतीले पनि आफ्नो भावना यस दिन पोख्ने, इमेल, च्याट र अन्य सञ्चारमाध्यमबाट मन माझ्ने र प्रेमी–प्रेमिका नयाँ ठाउँ घुम्न जाने गर्छन् । कतिपय युवक–युवती भ्यालेन्टाइन्स डे (प्रेम दिवस) किन मनाइन्छ, आपसमा रङहरू दलेर खुशीयाली साटासाट
शिवराज रेग्मी फागु अर्थात् होली पर्व झट्ट हेर्दा धार्मिक र सामाजिक पर्व मानिएपनि यसको छुट्टै वैज्ञानिक आधार समेत छन् । त्यसो त हाम्रा अधिकांश पर्वले मनोवैज्ञानिक र वैज्ञानिक आधार बोकेका हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि होलीको वैज्ञानिक महत्व विशेष छ
यी रक्तसमूह लामखुट्टेका लागि चुम्बक झैँ —
२८ फाल्गुन / गर्मी महिना सुरु हुँदैछ । यो मौसममा लामखुट्टेको टोकाइले हामी सबैलाई सताउँछ । तर कतिपय मानिसलाई भने लामखुट्टेले अलिक बढी नै टोक्ने गर्दछ । यस्तो किन हुन्छ त ? यस्ता मानिसलाई लामखुट्टे बढी टोक्छ : ननुहाउने लामखुट्टेलाई
माल्वा केरा ,ओदाने बाहुनका टुप्पी र ठकुरीका जुँगाको कथा
यो कथा एकादेशको पनि होइन, अर्को देशको पनि होइन, हाम्रै देशको हो । यो देशमा बाहुन र क्षेत्री त धेरै बस्छन्, तर यो कथा तीनजना बाहुनको टुप्पी र एकजना ठकुरीको जुँगामा सीमित छ । किनकि, यो देशमा ओदाने बाहुन र
उद्धव पुरी १८ बर्षदेखिको पत्रकारितामा अहिलेसम्म घर खासै...
प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस ) प्रदेश नं १ को अध्यक्षमा तीला लेकाली
बेलबारी, १७ चैत / प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस...